Xiisad Ka Taagan Mombasa Kadib Markii La Dilay Labo Baadari Oo Kiristan Ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 23 October 2013 4 April 2019
Mombasa, Oct 23, 2013, (Mareeg.com): Xaalada magaalo xeebeedka dalka Kenya ee Mombasa ayaa kacsanaan laga soo sheegayaa kadib markii halkaas lagu dilay labo baadari oo Kiristan ah.
Dilka labadaas baadari waxaa ka horreeyey dil maaamlo ka hor halkaas loogu geystay wadaad Muslim ah oo aad looga yaqaanay magaalada Mombasa, laguna magacaabi jiray Sheekh Ibaahim Ismaaciil.
Charles Matole oo ahaa madaxa kaniisadda Redeemed Gospel Church ayaa laga helay maydkiisa gudaha kaniisadda aroornimadii Axadda, xilli ay dadka masiixiyiinta ah isku diyaarinayeen inay ku cibaadeystaan kaniisaddaas, Sida ay sheegay qaar ka mid ah dadkii ka agdhawaa kiniisada uu joogay wadaadkan masiixiga ahi.
“Waxaan helnay maydkiisa iyadoo dhiig badan uu ka baxay madaxiisa,” ayuu yiri Morris Cali oo ka tirsan kaniisadda, isagoo sheegay in dhowr jeer oo hore loo soo diray fariimmo hanjabaad ah, balse aysan garanayn illaa hadda cidda ka dambeysa dilkiisa.
Sidoo kale, waxaa lagu dilay deegaanka Kilifi oo 60-km Waqooyi kaga beegan magaalada Mombassa wadaad masiixi ah oo lagu magacaabo, Ibraahim Kidata, iyadoo maydkiisa laga helay meel ku dhow goob lagu dabaasho.
Ku xigenka afhayeenka maamulka deegaanka Kilifi, Teddy Mwambire ayaa u sheegay warbaahinta in wadaadka la waayay Sabtidii, lana helay maydkiisa iyadoo jirkiisa laga helay dhaawacyo.
Magaalada Mombassa ee dalka Kenya ayaa waxaa ka tagnaa toddobaadyadii lasoo dhaafay xiisado ka dhacay dilka Sheekh Ibaahim Ismaaciil oo ay kula dhinteen gaarigii uu watay saddex qof oo kale 03-dii bishan Oktoobar.
Rabashado ka dhashay dilka wadaadkan Muslimka ah ayaa sababay inay dhintaan afar qof, balse ciidamada ammaanka ayaa ugu dambeyn ku guuleystay inay xaaladda dajiyaan.
Lama oga kooxaha dilka ka dambeeyay, waxaana booliska magaalada Mombasa ay wadaan howl galo, iyadoo wadooyinka lagu arkay ciidamo.
Xiisaddan cusub ee ka taagan Mombasa ayaa laga baqdin qabaa inay dhaliso isku dhacyo dhexmara Muslimiinta iyo Masiixiyiinta ku nool magaaldaaas, iyadoo magaaladaasi ay tahay magaalada labaad ee ugu weyn dalka Kenya.